विद्यालय बन्द नगर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल अलपत्र - Sankalpa Khabar
5. सभापति देउवाले गृहजिल्लामा स्वास्थ्य सामग्री पठाए
6. हुम्लाका दुई गाउँपालिका ‘सिल’
विद्यालय बन्द नगर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल अलपत्र
३ बैशाख १३:०५
काठमाडौं । वर्तमान सरकार कुन ढंगले चलेको छ भन्ने बुझ्न बिहीबार र शुक्रबारका दुई फरक निर्णय हेर्दा छर्लंग हुन्छ । कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र ढंगले फैलिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अभिभावकहरूलाई आफ्ना छोराछोरी स्कुल नपठाउन भन्यो । उसले १४ जिल्लालाई उच्च जोखिम भन्दै पहिले बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई महत्व दिँदै अपिल नै निकाल्यो ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अपिलको २४ घन्टा बित्न नपाउँदै शिक्षा मन्त्रालयले स्कुल कलेज बन्द नगर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकपछि मन्त्रालयले विद्यालय बन्द नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए । कोरोनाको संक्रमणको अवस्थालाई हेरेर स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भने विद्यालय बन्द हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि पनि शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा सहभागीहरूले पनि विद्यालय बन्द गर्न नहुने धारणा राखेको थिए ।
खासगरी प्याब्सन र एनप्याब्सनले स्कुल बन्द नगर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । स्कुल सञ्चालकहरूको दबाबमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ परेको देखिएको छ । त्यसैले उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलेको अपिलसमेत बेवास्ता गरेका छन् ।
शुक्रबार नै काठमाडौं महानगरपालिकाले कोरोना लागे एक साता स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा बढ्दो कोरोना महामारीमा अभिभावक अन्योलमा परेका छन् ।
यता, शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना भाइरस अति प्रभावित भनी किटान भएका १४ जिल्लाका विद्यालय जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) को समन्वयमा बन्द वा आंशिक रुपमा खोल्न पाउने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार शिक्षामन्त्री श्रेष्ठसहितको बैठकले विद्यालय बन्द गर्ने वा खोल्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको डीसीसीएमसीलाई दिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको परीक्षा स्थगित
२७ बैशाख १२:४६
एनआरएनएले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर उपकरण नेपाल पठाउने
२६ बैशाख १४:००
एमाले स्थायी कमिटीको निर्णय : माधव नेपालसहितका चार नेताको…
३० बैशाख ११:१८
२९ बैशाख ०७:५२
ठगीविरुद्धको अपरेसनमा तिव्रता, ट्राफिक प्रहरीको फन्दामा ३३ जना
३० बैशाख १४:४३
जाजरकोट जिल्ला अस्पताल कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण
३१ बैशाख १०:४५
२ जेष्ठ ०७:१३